ပိုမိုကောင်းမွန်သောလစာတိုးမြှင့်မှုအတွက်ထိပ်ဆုံး ၁၀ ချက် | Martech Zone
ပိုကောင်းတဲ့လစာတိုးမြှင့်ခြင်းအတွက်ထိပ်ဆုံး ၁၀ ချက်
အင်္ဂါနေ့, နိုဝင်ဘာလ 14, 2006 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
သင်သတိမပြုမိပါကကျွန်ုပ်မှာအခြားဆိုဒ်တစ်ခုရှိသည် Payraise Calculator ကို။ အသုံးဝင်မယ်လို့သင်မျှော်လင့်ပါတယ် မန်နေဂျာတစ်ယောက်အနေနှင့်ကျွန်ုပ်၏ ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်လစာတိုးမြှင့်ခြင်းကိုတစ်ချိန်လုံးတွက်လေ့ရှိသည် - ထို site သည်ပိုမိုလွယ်ကူစွာတွက်ချက်ရန်လိုအပ်လာသည်။
ပိုကောင်းတဲ့လစာတိုးမြှင့်ဖို့ဘယ်လို site အကြောင်းအကြံပေးချက်အချို့ကိုငါချင်ပါတယ်။ ငါထင်တယ်၊ လျော်ကြေးပေးခြင်းသည်မည်သည့်အလုပ်မဆိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ “ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” (သို့)“ အလုပ်ကောင်း” ကိုရခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အမြဲတမ်းသင့်အိတ်ကပ်ထဲ၌ပိုက်ဆံမထည့်ထားပါ။
နှစ်တွေတစ်လျှောက်မှာ ၀ န်ထမ်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ရောမန်နေဂျာတစ်ယောက်အနေနဲ့လစာစကားဝိုင်းတွေအများကြီးပိုလွယ်ကူလာတာတွေ့ရတယ်။ ဒါကြောင့်လစာပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အကြံပြုချက် ၅ ခုဒီမှာပါ။
သင်၏ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်တွင်လစာကုန်ကျမှုမဟုတ်ဘဲကုမ္ပဏီသို့သင်ယူဆောင်လာသည့်တန်ဖိုးကိုပြောပါ။ အလုပ်ရှင်များကသင့်အားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုအဖြစ်မြင်ရန်အရေးကြီးသည်။ တကယ်လို့မင်းကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကောင်းတစ်ခုဆိုရင်မင်းတို့မှာမင်းကိုပို ၀ ယ်တာကိုသူတို့သဘောမထားဘူး။
မိမိကိုယ်ကိုအခြား ၀ န်ထမ်းများနှင့်မနှိုင်းယှဉ်ပါနှင့်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထက်ပိုပြီးငွေရှာနိုင်မည်မဟုတ်သည့်အခြား ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး နှင့်မိမိကိုယ်ကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းသည်ကျန်းမာရေးမကောင်းပါ။ မန်နေဂျာများမကြာခဏဤပိတ်ထားကြသည် - စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်အတူ, လစာတိုးသူတို့ရဲ့အလုပ်၏အလွန်စိတ်ဖိစီးမှုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသူတစ်ပါးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းကသင့်ကိုကူညီခြင်းထက်ပိုစိမ်းကားသွားစေနိုင်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုအခြား ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး နှင့်အဖွဲ့များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်အခြား ၀ န်ထမ်းများနှင့်၎င်း၊ သင်နာမည်တစ်ခုရဖို့အရေးကြီးတယ်။
သင့်ဒေသအတွက်နေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ်ကဘာလဲ။ အကယ်၍ လူနေမှုအဆင့်အတန်း ၄ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်မှုနှင့်အတူဒေသတစ်ခုတွင် ၃% တိုးမြှင့်ပေးရန်သင့်ကိုကမ်းလှမ်းပါက…။ သင်ရုံလစာဖြတ်တယ်!
ကောင်းသောလစာတိုးမြှင့်မှုရရှိရန်သင်၏လစာနှုန်းနှင့်သင်ရရှိရမည့်အရာများအပေါ်အကဲဖြတ်ခြင်း / လစာတိုးမြှင့်ခြင်းတိုင်းနှင့်သဘောတူညီမှုရယူပါ။ အကယ်၍ သင်၏မန်နေဂျာသည် ၅% တိုးရန် ၅ ရည်ရည်ကိုပေးသည်ဆိုပါကသင်၏ရည်မှန်းချက်များကိုသင်ပြီးမြောက်အောင်ပြီးအောင်လုပ်ရန်နှင့်သူမနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမပြုမီသင့်အောင်မြင်မှုကိုသတိရစေပါ။
သင်၏ပုံမှန်သံသရာအပြင်ဘက်တွင်လစာတိုးမြှင့်ပေးရန်တောင်းခံရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။ သင်သည်သင်၏မန်နေဂျာသို့မဟုတ်သင်၏ကုမ္ပဏီ၏ခြေအိတ်များကိုခေါက်လိုက်လျှင်လခတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏ကျေးဇူးတင်မှုကိုပြသရန်သူတို့ကိုအချိန်ပေးပါ။ လုံးဝခွင့်မပြုပါကအပိုဆုကြေးတောင်းပါ။
သင်၏လစာငွေပမာဏသည်သင်၏ဒေသနှင့်သင်၏အလုပ်အတွက်မည်မျှဖြစ်ကြောင်းသိရှိပါ။ ဒီသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူဆိုဒ်များအများအပြားရှိပါတယ်, တ ဦး တည်းအခမဲ့တ ဦး တည်း Indeed.com.
အကယ်၍ သင်သည်အလွန်ခက်ခဲသောလစာနှင့်ပconflictိပက္ခဖြစ်နေပါကသင်၏လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာနမှလစာစစ်တမ်းတောင်းခံပါသို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ပင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။ Salary.com သည်ပြည့်စုံသောလစာစစ်တမ်းကိုပေးသည် ဒီမှာ.
အောက်ခြေလိုင်းအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေသည့်ပန်းတိုင်များပေါ်တွင်သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုအာရုံစူးစိုက်ပါ။ ထပ်ဆောင်းရောင်းအား၊ ၀ ယ်ယူသူပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း၊ ထပ်တိုး ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များတိုးတက်ခြင်း၊ ဘတ်ဂျက်များကိုလျှော့ချခြင်း။ အောက်ခြေလိုင်းအတွက်သင်ခိုင်မာသည့်ဒေါ်လာနှင့်ဆင့်ဆင့်ပေးသည့်အခါလစာတိုးမြှင့်ပေးရန်တောင်းဆိုခြင်းသည် ပို၍ လွယ်ကူသည်။
ကံမကောင်းစွာပဲ၊ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့ ၀ န်ထမ်းကောင်းတွေအတွက်အလုပ်အကိုင်တွေများတဲ့နေ့ရက်တစ်ရက်မှာအသက်ရှင်နေကြရပါတယ်။ သင်ရရှိနိုင်သောအများဆုံးလစာသည်သင်၏အလုပ်ရှင်ကိုစွန့်ခွာပြီးအခြားအလုပ်တစ်ခုကိုရရှိသောအခါသင်ရရှိသောအများဆုံးလစာဖြစ်သည်။ ကံဆိုးပေမယ့်စစ်မှန်တဲ့! ရှည်လျားသောရိုက်ချက်သည်အမြဲတမ်းအစဉ်အမြဲရှိသည်။ သင်မထွက်ခွာမီတွင်ကောင်းမွန်သောတန်ပြန်ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုကိုရနိုင်သော်လည်း၎င်းတို့ကိုသင်မပေးမီသင်ကိုမပေးမီသင်ကဘာကြောင့်ကမ်းလှမ်းရန်ဆုံးဖြတ်သည်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်မေးသင့်သည်။ သင်ထိုက်သင့်သောလျော်ကြေးရရန်ထွက်ခွာခြင်း၏ခြိမ်းခြောက်မှုကိုမယူသင့်ပါ။
Old Spice ဘယ်တော့အေးသွားပြီလဲ။